Momba anay - rojom-pamokarana manaraka
Dropshipping dia iray amin'ireo maodelim-barotra malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Nametraka ny tenany ho asa manan-danja miaraka amin'ny fampiasam-bola ambany sy malefaka. Na izany aza, tsy ampy ny fananganana magazay an-tserasera sy fampisehoana ny vokatrao; fampiroboroboana sy fahafaham-po ny mpanjifa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny orinasa rehetra. Iray amin'ireo mpamatsy orinasa toy izany, izay miasa ho toy ny sehatra mahomby hanombohana ny orinasanao dropshipping maimaim-poana manerana an'izao tontolo izao dia Nextschain.
NeXTchain dia nandalo dropshipping ho an'ny amazon, ebay, aliexpress nandritra ny 7 taona. Mitantana mpamatsy sy ozinina ambony kalitao an'arivony maro izahay any Sina mba hanome vokatra maherin'ny 400.000 avo lenta hamidy. Ny NeXTchain dia mamela ny mpampiasa hifantoka amin'ny ampahany amin'ny varotra sy ny varotra, satria ny manampahaizana azy ireo no mitantana ny fizarana sy ny fizotry ny fandefasana. Ny vidin'ny ambongadiny dia tsara indrindra eny an-tsena, ahafahan'izy ireo mahazo tombony ambonimbony kokoa ary mampitombo ny vola azony.
NeXTchain dia iray amin'ireo mpamatsy dropshipping vitsivitsy izay mandefa baiko amin'ny ankapobeny manerantany amin'ny vidiny mirary. Ny rafitry ny lozisialy manan-tsaina dia manitsy azy ireo ary mandefa ny baiko mialoha mandritra ny vanim-potoana fara tampony toy ny Black Friday na Krismasy ho an'ny fandefasana ara-potoana. Mpanome tolotra maro no miantoka ny fanontana ny mombamomba ny orinasa mpampiasa amin'ny faktiora. Ny NeXTchain dia mamela ny faktiora namboarina maimaim-poana amin'ny baiko rehetra.
Ambonin'ny zava-drehetra, ny iraka ataontsika dia ny manampy ny ankamaroan'ny orinasa hampihena ny vidiny ary hitsitsy fotoana betsaka amin'ny orinasam-barotra E-commerce. Amin'ny alàlan'ny vahaolana dropshipping iraisan'ny iray, manampy amin'ny fividianana entana amin'ny mpamatsy anay izahay, ny kalitaon'ny kalitao, ny fonosana amin'ny toe-javatra tsara ary hitantanana ny mombamomba ny fanarahan-dia rehetra. Ny ataon'ireo mpivarotra dia ny fifantohana amin'ny fampiroboroboana orinasa. Miaraka amin'ny serivisy fihenam-bidy avo lenta an'ny NeXTChain, ny mpivarotra dia afaka mifantoka amin'ny kalitao ary koa amin'ny kalitao ary manatsara ny orinasany.
Miezaka ny hahatanteraka an'io tanjona io izahay amin'ny fanatsorana ny famokarana vokatra ho an'ny tsena mpanafika an-tapitrisany an-tapitrisany amin'ny Internet izay miditra amin'ny sehatry ny fanombohana sy / na fampiroboroboana orinasa antsinjarany.